Daraasad: Dawooyinka dhiig-karka oo la ogaaday iney wanaagsan yihiin habeenki in la qaato - BBC News Somali
Cilmi baadhayaal daraasad ku sameeyey dawooyinka dhiig-karka lagula tacaala ayaa sheegay in dawada la qaato xilliyada uu qofku seexanayo.
Xaajo ugub ah: Wasiir hore oo qirtay arrin lama filaan ah
Barafasoor Ramon Hermida oo kooxda daraasadda sameysay oo ka tirsan jaamacadda Vigo wuxuu sheegay iney dhakhaatiirtu la gudboon tahay iney bukaaknkooda sidaa kula taliyaan: "Wax kharash ahna kagama baxaya. Haddana waxay badbaadinaysaa nafaf badan."
"Qaabka daweynta ee hadda loo adeegsado dajinta dhiig-karka aadka u sarreeya kuma tala bixinayo xilliga ku habboon ee dawada dhiig-karka la qaadan karo natiija fiicanna ay ka dhalaneyso."
"Natiijada daraasaddana waxay tilmaameysaa bukaanka sida joogtada ah u qaato dawooyinka looga hortago dhiig-karka xilliga habeenki marka ay subixi hurdada ka soo toosaan uu dhiiggoodu noqonaya mid deggan, waxaana sida oo kale yaraaneyso khatarta uu u geli karo geeri degdeg ah iyo xididdada dhiigga wada oo dhibaata uu kala kulmo."
Caro ka dhalatay hooyo sii dhimanaysa oo lagu jeesjeesay